ရထားခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများမော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ3၏ 15 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်. လုပ်တယ်, သို့သော်, အချို့သောကန့်သတ်နှင့်အတူလာ. အထူးသဖြင့်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်စီစဉ်ထားပါက. ကလေးတစ်ယောက်အားသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်ကန့်သတ်ထားသည်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ Covid-19. ငါတို့ပြောတတ်တဲ့အရာအားလုံးပဲ, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကမ္ဘာ့မြိ်ု့များနှင့်လုံးဝကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းကိုနှင့်သင်တန်းရထားခရီးသွားစဉ်းစားလမ်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ. ရထားခရီးသွားခြင်းသည်များစွာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာတွေရဲ့ array မှနေရာဖြစ်သည်, ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောအရပ်နှင့်တိုက်ကြီးရဲ့ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ဖမ်းယူဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးအရာ၏. ဒါကဘာကြောင့်ယနေ့ဖွင့်, ကျွန်တော်တက်ဝိုင်းင့်3ကျနော်တို့အကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-ရှုမြင်ဖြစ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, တချို့၏ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာကျော်အဆောက်အဦးများဖုံးအုပ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးယားဖို့စွန့်စားမှုအပေါ် Go နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်. သင်တစ်ဦး avid အစားကောင်းကြိုက်သူများဆိုရင်, သင့်ရဲ့အာခေါင်, အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ Instagram ကိုအစာကျွေးခြင်းသင်တွေ့ကြုံခံစားတံ့သောအရာကိုနှင့်အတူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလိမ့်မည်အဖြစ်. ဒါပေါ့, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ coronavirus ၏လက်ရှိဖြစ်ပွားဖရိုဖရဲသို့လူတိုင်းရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပစ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျ coronavirus ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်မသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုစောင့်ရမည်ဆိုပါကကသိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်ကရဲ့အရေးကြီးသောအပေါ်ဆက်လက်ရန်ရွေးချယ်ကြပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမနိုင်ပေမယ့်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ် Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးနှင့်အလိုအလျောက်မှာတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား. ဒါဟာလာနှငျ့သငျအဖြစ်သွားကြဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကျေးဇူးပြုပြီးင်, စိတ်ကြိုက်အပေါ်ပိုရှည်တစ်နေရာတည်းနေဖို့, နှင့်စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်သွားပါ; သငျသညျနှောင့်အယှက်မပေးနိုငျခဲ့ပါလျှင်. သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောလိုက်လျော…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သင်တို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, ဗင်းနစ်ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးထူးခြားကြည်နူးဖွယ်မြို့ဖြစ်၏, လျှင်မကမ္ဘာတွင်. အီတလီတူးမြောင်းနှင့်အသေးစားကျမ်းပိုဒ်ထဲကလုံးဝဖန်ဆင်း, အားလုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအပေါ်ထားတဲ့မုသား၏. ဒါကမြို့တတစ်ခုသို့လှည့်ခဲ့သည်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ပြင်သစ်ဆွဲဆောင်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်နေရာဖြစ်သည်. ပဲရစ်အတွက်အထင်ကရ Eiffel မျှော်စင်ကနေ Nice ၏ pebbled ကမ်းခြေရန်, မမှအဆုံးမဲ့အရာတိုင်းပြည်. သင်တို့မူကားတစ်ဦး layover အပေါ်သွားရောက်လည်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပါလျှင်, သို့မဟုတ်သင်ဟိုတယ်မှထွက်ပြီးပြီ…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အမ်စတာဒမ်အလည်အပတ်ခရီးတစ်ခုခမ်းနားသောမြို့ဖြစ်၏. သငျသညျဖြစ်ကောင်းပျင်းရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုမြင်ကဒီမှာလုပ်ဖို့သိပ်ရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကတုန်းပဲအမှုအရာထရောမွှေဖို့အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမ်စတာဒမ်သည်အံ့သြစရာများစွာအတွက်အလွန်ကောင်းသောအစပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်…